Iyo iPhone 7 yaigona kurekodha 4K vhidhiyo kaviri iyo FPS yeiyo 6s | IPhone nhau
Kana iyo Vietnamese ichireva izvo atumira Ruzivo urwu nderwechokwadi, ikozvino tinogona kunzwisisa chikonzero nei Apple ichawedzera zvakapetwa masimba ekuchengetedza eiyo iPhone 6s: iyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus, iyo yatinoyeuka kuti, kunze kwekushamisika, ichaunzwa mangwana na19: 00 pm muSpain peninsula (10:00 a.m. muPacific) ichakwanisa kurekodha ne 4K resolution, asi nekaviri mafuremu paminiti (FPS) pane iPhone 6s.
Iyo iPhone 6s inogona kurekodha ine 4K resolution uye pa30fps, asi vezvenhau veVietnam vanoona kuti iyo iPhone 7 / Plus ichakwanisa kurekodha nesarudzo imwechete uye pa60fps. Kana iwe wakanyora vhidhiyo mu4K, iwe uchave wakasimbisa kuti huremu hwemavhidhiyo ane resolution yakadaro kutsamwa chaiko, vhidhiyo yemaminetsi matatu inogona kurema kupfuura 1GB. Uye zviri pa3fps, saka kana iyo math isingakundike ini, a 4K vhidhiyo pa60fps Inogona kurema zvakapetwa zvakapetwa, saka iko kuchengetwa kweiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, iyo yatinoyeuka ichave nesarudzo dze128GB -inotsiva iyo 64GB- uye 256GB, haina kure kurerwa.
Iyo iPhone 7 ichaitawo kusvetuka muhunhu muvhidhiyo kamera
Chinhu chakanaka ndechekuti veVietnamese vezvenhau havataure kuti kurekodha nehunhu uhwu kunongoitika kune iyo iPhone 7 Plus. Kusiyana. Izvo zviri kutaurwa ndezvekuti hunhu uhu inogona kutorwa neiyo 7-inch iPhone 4.7, saka imwe yevaviri: ingave iyo iPhone 7 Plus inorekodha nehunhu hwakafanana kana ivo vachiri neacce kumusoro sleeve yavo yezwi rinokosha remangwana, izvo zvisingafanire kushamisika kana iwe uchifunga kuti kamera yeiyo iPhone 7 Plus iri 12 + 12Mpx.
Panguva ino ndinoda kutaura kuti iwe unofanirwa kungwarira nekutora nemhando yakadaro. Handikwanise kutaura kuti ndine komputa yakaipa kwazvo uye yangu 2009 iMac ine 8GB ye RAM inotambura kana ndichiedza kugadzirisa vhidhiyo yakanyorwa mu4K pa30fps, saka ndafunga kusiya chigadziriso kuti ndinyore chete pa1080p pa60fps. Chengeta izvi mupfungwa paunoenda kunorekodha vhidhiyo neiyo iPhone 7, kana ichi chitsva chinzvimbo chikasimbiswa.
Ruzivo irwo rwaizosimbisa kuvepo kwerimwe remavara matsva einotevera apple apple, iyo inenge nhema -in matte- iyo yaizotora nzvimbo yazvino grey. Runyerekupe zvakare runovimbisa kuti kuchave nemumwe mutema, asi uyu mune yakajeka ruvara. Kuti ive yakanyatsojeka, iwo mavara matsva anonzi "Piano Nhema" uye "Glossy Nhema".
Zvimwe zvinhu izvo svikiro reVietnam raizosimbisa ndizvo zvichave isina mvura, IPX7 iyo inobvumidza kuisa iyo iPhone maminetsi makumi matatu pakadzika kwemita imwe, uye a vhezheni itsva yebhatani repamba kuti runyerekupe rwese runovimbisa kuti ichave akagunzva uye kwete echimakanika, ndiko kuti, kuti haizonyure semabhatani ese emidziyo yeIOS yatakaona kudhara. Mangwana tichazoziva kana vezvenhau veVietnamese vari muchokwadi mune ruzivo kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 yaigona kurekodha 4K vhidhiyo kaviri iyo FPS yeiyo 6s
Izvi zvaizoreva kuti kufamba kunononoka kwaizowedzerawo mu fps, ndiko kuti, kana isati yagona kurekodha 1080 pa120 fps, ikozvino yaizokwanisa here kunyora 1080 pa 240fps?
Mhoro Maiki. Izvo zvinogona kuitika, asi izvozvi hatigone kuziva.
Ramangwana - Karenda yezviitiko kumaawa ese emahara kwenguva yakati rebei